कान कराउने रोगको उपचार
अगस्ट 14, 2016 साइन्स इन्फोटेक Health
इएनटी (नाक, कान, घाँटी) रोग विषेशज्ञद्वारा यस रोगको परीक्षणका लागि एक किसिमको जाँच गराइन्छ जसलाई अडियोमेर्टरी भनिन्छ । यो बहिरोपन नाप्ने तरिका हो । रिपोर्ट हेरर चिकित्सकले के गर्ने भनेर सल्लाह दिन्छ ।
यस रोगको कुनै औषधि हुँदैन । यसको उपचार भनेको कानमा (हेयरिङ–एड) लगाउने हो । यसबाट आवाज प्रस्त सुनिन्छ ।
एलोप्याथिक चिकित्सामा यस रोगलाई निको पार्न गाह्रो छ । हेयरिङ–एड कानमा लगाउन सल्लाह दिइन्छ । यस यन्त्रले आवाज ठूलो पारेर कानभित्र पठाइदिन्छ र व्यक्तिले राम्ररी सुन्नसक्छ । यो कान सुन्ने यन्त्र विभिन्न आकारप्रकारमा उपलब्ध छन् ।
होमियोप्याथिक उपचारबाट समस्या हटाउन सकिन्छ । होमियोप्याथिक औषधिको विशेषता भनेको यसमा अन्य नकारात्मक प्रभाव हुँदैन । होमियोप्याथिक औषधिले सोझै हाम्रो शरीरको मुख्य नियन्त्रक अर्थात् मस्तिष्क स्नायुहरूमा प्रभाव पारेर मस्तिष्कद्वारा पीडित अंग या ग्रन्थीलाई दुरुस्त हुने प्रेरणा पठाउँछ । यो एक स्वउपचारको सही तरिका हो । यी औषधि नियमानुसार प्रयोग गर्ने हो भने कान बज्ने रोगबाट सदाका लागि सजिलैसित छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट – डा. लालितकुमार मिश्र, शुक्रवार, साउन २८, २०७३
← कान कराउनुको कारण के हो ?
गर्मीमा पसिना किन आउँछ ? →
अगस्ट 14, 2016 जुलाई 24, 2017 साइन्स इन्फोटेक
अगस्ट 14, 2016 डिसेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक
अगस्ट 13, 2016 जुलाई 24, 2017 साइन्स इन्फोटेक